MUXUU EEYKEYGA SANKIISA SANKA UGA BEDDELAY MADOW UNA NOQDAY CASAAN? - EEYAHA
Midabka sanka eygu wuu ku kala duwanaan doonaa eey ilaa eyga iyadoo kuxiran nooca. Waxay noqon kartaa madow, bunni, beer, casaan, ama midab la mid ah jaakaddiisa. Mararka qaarkood sanka eygu wuxuu ka bilaabi karaa hal midab oo wuxuu u beddeli karaa mid kale markuu sii gaboobayo. Eydu badanaa waxay ku dhashaan sanka casaanka, oo hadhow madoobaada. Maxay ka dhigan tahay marka eeyga sankiisu lumiyo midabkiisa oo noqda midab casaan ama caddaan? Sababaha ayaa ku kala duwan. Ka-midabaynta sanka marmarka qaarkood dhib ma leh, laakiin mararka qaarkood waa tilmaam in eygu u baahan yahay daryeel caafimaad. La xiriir dhakhtarkaaga xoolaha haddii aadan garanayn sababta eyga sankiisu u lumiyay midabkiisa.
Sababaha sababta sanka eygaagu u-deyn-karo
timaha dhaadheer ee ruushka
Cimilada: Sababta ugu badan ee sanka eygu u yeesho midabkiisa waxaa loo yaqaan sanka jiilaalka ama sanka barafka. Qaar sanka eyga ah ayaa midabada ka bedela midab mugdi ah oo midabkeedu yahay casaan marka cimilada qabow ay isku rogto mar kale mugdi ah marka cimiladu kululaato. Sida caadiga ah markii sanku midab badalo cimilada awgeed ayuu qayb ahaan kaliya isu beddelaa casaan sida ka muuqata sawirka kore. Sanka barafku wuxuu umuuqdaa inuu si toos ah ula xiriiro heerkulka oo uusan waxyeello u lahayn eeyga. Dembiilaha waxaa loo maleynayaa inuu burburay enzyme loo yaqaan 'tyrosinase', oo ah waxa sameeya melanin. (Melanin waa waxa midabka, ama midabka, siiya timaha, maqaarka iyo qaybaha indhaha.) Enzyme-ka ayaa ah mid heerkulka xasaasi ka ah oo daciif noqda da'da.
Noocyada qaar ee u nugul sanka oo isbeddela cimilada ayaa ah Buurta Bernese , Dahab dahab ah , Labrador dib u habeyn , Xarago iyo Adhijre .
Da 'weyn: Eyga sankiisu wuxuu waayi karaa midabkiisa markii uu gaboobo.
Dhaawac: Haddii eey la kulanto nooc ka mid ah dhaawacyada sida xoqitaan ama xoqid, sanka ayaa u rogi kara casaan marba marka uu bogsanayo. Midabka ayaa sida caadiga ah soo laaban doona muddo kadib.
Infekshinka bakteeriyada: Sanka laga yaabee inuusan midabkiisu khafiifin laakiin u muuqan karo mid bararsan, xanuun leh, qolof leh ama haddii kale aan caafimaad qabin. Waxaad ubaahantahay inaad laxiriirto dhaqtarka xoolaha hadii arintu sidan tahay.
Midabaynta sanka, oo sidoo kale loo yaqaan 'Dudley Sanka' waa marka eeyga sankiisu u rogo gabi ahaanba casaan ama xitaa caddaan sababo aan la garanayn. Mararka qaarkood sanka eygu weligiis dib uma beddelo. Eeyaha qaarkood waxay si aan kala sooc lahayn u soo ceshan doonaan midabkooda ama isbeddelayaan xilli ahaan.
Noocyada u nugul Dudley Sanka ayaa ah Afqaanistaan ​​Hound , Doberman Pinscher , Dahab dahab ah , Dejiye Irish , Tilmaame , Poodle , Samoyed iyo Adhijir Jarmal Cadaan ah .
La xiriir xasaasiyadda (la xiriir dermatitis): Marka eey xasaasiyad ku leedahay waxyaabaha sankiisu si toos ah ula xiriiro. Dibnaha badiyaa sidoo kale way saameeyaan Waxaa laga yaabaa inaad sameyso shaqo baaritaan si aad u ogaatid waxa eygu xasaasiyadda ku leeyahay. Sanka iyo mararka qaarkood aagga ku hareeraysan ayaa laga yaabaa inay u muuqdaan kuwo bararsan, xanuun leh, qolof leh ama haddii kale aan caafimaad qabin. Mararka qaarkood eeygu wuxuu xasaasiyad ku yeelan karaa noocyo caag ah qaarkood. Waad diidi kartaa xasaasiyadda ku jirta baaquli cunto caag ah adigoo u beddelaya baaquli bir bir ah.
Pemphigus, oo ah cillad maqaarka la xiriirta oo la xiriirta difaaca jirka: Xaaladdan waxay sababi kartaa nabaro iyo qolofta qolofta eey iyo sanka eyga. Xaaladda waa la daaweyn karaa waana in dhakhtarka xoolaha la arkaa.
Cudurka “Discoid Lupus”: Waa jirro kale oo maqaarka ku dhaca oo la xiriirta cudurro kale oo sidoo kale sababa nabarro agagaarka iyo sanka eyga. Xaaladda ayaa ka sii dari karta marka eey u dhacdo qorraxda.
Vitiligo: Cudur difaac oo saameyn ku yeelata maqaarka maadaama uu xanibo unugyada caafimaadka qaba, ee midabbada qaada iyagoo ku weerara unugyada difaaca jirka. Xaaladdaani ma noqon karto oo kaliya mid eeyga sankiisa casaan u ahaado, laakiin waxaad caadi ahaan arki doontaa luminta midabka meelaha kale ee jirka, iyadoo jaakadda loo beddelayo midab cad ama timo faafay ama balastarro. Cilad-darradu way ka sii xumaan kartaa waqtiga ka dib iyagoo isku beddelaya eey mugdi ah oo caddaan ah. Eyga qaba Vitiligo badiyaa waa caafimaad qabaa maadaama uu inta badan saameyn ku yeesho muuqaalka eyga oo keliya.
Noocyada u nugul Vitiligo waa kuwa Dachshund , Doberman Pinscher , Adhijirka Jarmalka , Labrador dib u habeyn iyo Rottweiler .
Idiopathic waa xaalad ka dhigi karta eeyga sankiisa, bushimaha iyo baalasha indhaha inay lumiyaan midabka. Sababta lama oga.
Cudurka 'VKH-like syndrome' ama 'Uveodermatological Syndrome' (UDS) waa cudur isdifaaca jirka oo qofku iska difaaco infekshinka, unugyada T-yada, waxay weeraraan unugyada sameysma melanin (melanocytes) ee jirka. Melanin waa waxa midabka, ama midabaynta, siiya timaha, maqaarka iyo qaybaha indhaha.
Eyda sanka casaanka ama cadka leh ayaa u nugul qoraxdu waana in laga taxadaro. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad marto kareem qorrax intaadan u oggolaan eeyga banaanka. Xaaladaha badankood eey uu sankiisu midabbada beddelay sabab uma aha walaac, hase yeeshe, mararka qaarkood waa sidaas. Hubso inaad la xiriirto dhakhtarkaaga xoolaha si aad u hubiso inaysan ku xirnayn arrimo caafimaad oo la xiriira.
muxuu u egyahay eyga eskimo american ah
Waxaa qoray Sharon Maguire©Xarunta Macluumaadka eeyga®Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay
Dabiiciga Dabiiciga ah
Waa Hab Nololeed
Waa maxay sababta eydu u tahay inay noqdaan kuwa raacsan
Maxay Ka Dhigantahay Inaad Toobato?
Eeyadu Jacaylka oo keliya ayey u baahan yihiin
Heerkulka Eeyaha Kala Duwan
Luqadda jirka eey
Joojinta Dagaalada Ka Mid ah Xirmadaada
Tababarka Eyga iyo Dabeecadda Eyga
Ciqaabta iyo Saxitaanka Eeyaha
Miyaad u diyaarinaysaa eeygaaga guuldarro?
La'aanta Aqoonta Dabeecadda Eyga
La shaqeynta Ey cabsi badan
Eey Duug ah, Khiyaamo Cusub
Fahamka Dareenka Eyga
Eygayga ayaa lagu xadgudbay
Xoojinta Positive: Ma ku filan tahay?
Eyga Dadka Waaweyn iyo Eyga cusub
Muxuu Eygeygu sidaa u yeelay?
Waddo Haboon oo Loogu Socda Ey
Socodka: Gudbinta Eeyo Kale
Soo Bandhigida Eyda
Eyda iyo Dareenka Aadanaha
Eydu ma kala soocdaa?
Ku hadlaya Eyga
Eeyaha: Cabsida Duufaannada iyo rashka
Shaqo bixinta waxay ka caawisaa Eyga arrimaha
Barida Eyda si loo ixtiraamo caruurta
Aadanaha Ku Haboon Isgaarsiinta Eyga
Milkiilayaasha Ey Rude
Dareenka Quudinta Canine
Bini'aadamka Ey No-No: Eygaaga
Bini'aadamka Eey No-Maya: Eyda kale
Su'aalaha ku saabsan Eyda
Walaaca Kala-baxa eeyaha
Dabeecadaha ugu waaweyn eeyaha
Keenida Guriga Ilmaha Cusub ee Aadanaha ah
Kusoo dhowaanshaha Ey
Aasaasida iyo Haynta Jagada Alfa
Xerada Alfa Boot eeyaha
Alaabta guryaha ilaaliso
Joojinta Eyga Boodaya
Adeegsiga cilmu-nafsiga aadanaha ee Ey-boodka
Eeyaha Baacinaya Baabuurta
Koolalka Tababarka. Miyay tahay in la isticmaalo?
Bixinta iyo Dabagalka Eygaaga
Peeing Is dhiibid ah
Eey Alfa ah
Yuu u janjeedha dagaalka badan, eeyaha ama Dheddigga?
Caawinta: Ilaalinta Ibta Naasaha
Runta ka dambeysa Godka Bull Terrier
Ka ilaalin Eygaaga weerarada eyga
Hoyga-Dilalka Sare ee SPCA
Dhimasho aan Caqli lahayn, Ey si qaldan loo fahmay
Cajiib Maxay Yeelan Kartaa Hogaanka Yar
Ubadalida Ey Samatabbixin
Aqoonsiga Cunnada DNA Canine
Kordhinta Alpha Puppy
Kordhinta Dhexdhexaad Ey Waddo ah
Kordhinta Dhabarka Ey Yar
Marxaladaha horumarka eeyaha
Ku soo bandhigida Sanduuq Cusub Ey ama Ey
Imtixaanka Dabeecadda Eeyaha
Dagaal Ey - Fahmitaanka xirmadaada
Fahamka eygaaga ama eygaaga
Eyga baxsadka ah!
Ma inaan Helaa Ey Labaad?
Eygaaga Ma Ka Baxsan Yahay Xakamaynta?
Koole Tababarka Eyga Dhalanteed ah
Sawiro Ey Sare
Tababarida Eeygaaga ama Eygaaga
Diyaar Ma U Tahay Ey?
Bixiyeyaasha iyo Badbaadinta
Raadi Eyga Wanaagsan
Lagu qabtay Sharciga
Xirmooyinka Eeyaha waa kan!
Buugaagta eeyaha lagu taliyey iyo DVD-yada
boston terrier iyo isku dachshund
heli sirdoonka eey by sawirka
adhijirka Australiya madow iyo bunni
somali bulldog feer feedh isku jir ah oo iib ah
adhijir weli Jarmal Bernard muqisho